Covid-19 ရောဂါအပြင်းအထန်ကူးစက်ခံစားနေရသော ကလေးမြို့၊ တာဟန်း (Tahan) အတွက်အကူညီလိုအပ်မှုများအတွက်လှူဒါန်းခြင်း။ - Chin Land FC
No.163-166, Pyi Chian Tha St.,48 Block North Dagon, Yangon, Myanmar
+959516 2109,+959403 306 788
Htet Wai Lyn
Htun Lyn Aung
Aung Hien Kyaw
George Kehinde Olatunde
Zin Ko Tun
David Lalhruat Fela
Saw Ehlaw Mu Sein
Shwe Win Tun
Nyein Min Oo
Wai Yan Myo
Covid-19 ရောဂါအပြင်းအထန်ကူးစက်ခံစားနေရသော ကလေးမြို့၊ တာဟန်း (Tahan) အတွက်အကူညီလိုအပ်မှုများအတွက်လှူဒါန်းခြင်း။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးမြို့နယ်၊ တာဟန်းရှိ Covid-19 ကူးစက်ရောဂါအပြင်းအထန် ခံစားနေကြသောချင်းလူမျိုးများ​၏ အရေးပေါ်လိုအပ်ချက် အတွက် ဒီကနေ့ ဇွန်လ (၂၃)၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် Chinland FC အသင်း ပိုင်ရှင် CK No Chhum နှင့် အသင်း ဥက္ကဌ Thawng Tha Thang (Saya TT) ​၏ မိသားစုဝင်များ မှ Oxygen Concentrator (၂) ခု ၊ PPE ဝတ်စုံ အစုံ (100)၊ face shield (100)၊ KN 95 Mask (100)၊ face shield glass(100)၊ Covid-19 Antigen Test Kit များနှင့် ခြုံစောင်များကို ပေးပို့လှူဒါန်းကြပါသည်။
အသင်း ပိုင်ရှင် နှင့် အသင်းဥက္ကဋ္ဌ U Thawng Tha Thang တို့ မှ “ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ Covid-19 အပြင်းအထန်ကူးစက်နေသော ကျီးခါးမြို့ နှင့် ကလေးမြို့ များ အတွက်လည်း မီးစက်ကြီးနှင့် Oxygen Concentrators များ နှင့် အခြားလို အပ်ချက်များ ကိုလည်း လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
အသင်းဥက္ကဋ္ဌ Saya TT မှ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ Covid-19 ကြောင့် အသက် ဆုံးရှုံးလိုက်ရသော ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုး များ အတွက် အတော်ထိတ်လန့် ဝမ်နည်း မိပါတယ်။
တတ်နိုင်သလောက် ဆက်လက် ကူညီပေးသွားပါ့မည်။ဘုရားသခင် ရဲ့ ကွယ်ကာခြင်း မြန်မာပြည်ကြီးအပေါ်ရှိဖို့လည်း အမြဲ ဆက်လက် ဆုတောင်းနေပါ့မည်။
ဤကဲ့သို့ ချင်းပြည်နယ်နှင့် မြန်မာပြည်နေရာဒေသအနှံ လိုအပ်နေသောသူများအတွက် အားစိုက်လှူဒါန်းပေးနေသည့် အသင်းပိုင်ရှင် U Dr. CK No Chhum နှင့် အသင်းဥက္ကဌ U TT ​၏ မိသားစုဝင်များဝင်များ အပေါ် ဘုရားသခင်သာ၍ ကောင်းကြီးပေးပါစေ။
February 20, 2020 Sa Lin
UNIVERSITY FC3- 1 CHINLAND FC
February 14, 2020 PADONMAR/M3
MYAWADY FC0- 1 CHINLAND FC
March 14, 2020 PADONMAR/M3
KACHIN UNITED FC0-0CHINLAND FC
March 6, 2020 Sa Lin
MFF0-0CHINLAND FC
အသက်ရှုကြပ် ကူးစက်ရောဂါတစ်မျိုး အပြင်းအထန် ကူးစက်နေသော ချင်းပြည်နယ် ကျီးခါးမြို့အတွက် အရေးပေါ် အကူအညီလိုအပ်ချက်များအတွက်လှူဒါန်းခြင်း
မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် လိဂ်(1)သို့ Chinland FC အသင်းတန်းတက်ကစားခွင့်ရ
Chinland FC မှ Chinland for Paletwa အစီအစဉ်ဖြင့် ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်၀ဒေသရှိ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအား စတုတ္ထအကြိမ်ဖြင့် သိန်း(၅၀) ပါဝင်လှူဒါန်းခြင်း
Chinland For Paletwa အစီအစဉ်တွင် စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအား တတိယအကြိမ် သွားရောက်ကူညီလှူဒါန်းခဲ့
Chinland Football Club (GFA FC in its former name) was founded by Dr. CK No Chhum in 2006.
Copyright © 2021Chinland FC. All Rights Reserved.